Eyden Makgidi - एक प्रसिद्ध स्कटिश र आइरिस फुटबल। उहाँले4अप्रिल मा, 1986 मा जन्म भएको थियो र वर्तमान "Everton" खडा भएको अंग्रेजी फुटबल क्लब लागि। सबैभन्दा ज्वलन्त र मनोरंजक तथ्य यो चाहनुहुन्छ तपाईं थप बताउन भनेर midfield मा क्यारियर, एकदम रोचक छ।
Eyden Makgidi बाल्यकाल देखि खेल को लागि एक तरस याद गर्नेहरूलाई खेलाडीको छ। एक प्रारम्भिक उमेर देखि उहाँले यस्तो "Busby" र क्लबहरू मा जुनियर स्तरमा प्ले "Govanhill।" उहाँले 15 हुँदा Eyden Makgidi उहाँले अध्ययन जसमा संस्थाले बाँकी। उहाँले सबै आफ्नो खाली समय खेल्दै फुटबल भुक्तानी गर्न सेन्ट Ninian गरेको हाई स्कूल जान छैन निर्णय गरे। उहाँले गम्भीर खेल अध्ययन गर्न थाले जो आफ्नो पहिलो क्लब "रानी गरेको पार्क" भएको छ। 2000 देखि 2001 सम्म - त्यहाँ जवान मिडफिल्डर एक वर्ष बिताए। कि पछि उहाँले आफ्नो वास्तविक, व्यावसायिक क्यारियर सुरु भयो।
र युवा टोली लागि - 2001 मा, Eyden Makgidi उहाँले युवा को लागि प्ले जहाँ क्लब, र पहिलो गए। यस समयमा उहाँले प्रकटीकरण लन्डन "शस्त्रागार" को प्रतिनिधिहरु को स्पष्ट चासो थियो राम्रो प्रदर्शन गरिरहेको छ। तर Irishman अझै पनि "सेल्टिक" को बाँध्न रहन निर्णय गरे।
2004 मा उहाँले आफ्नो debut बदल्न आए जो पहिलो टोली लागि (अक्सर हुन्छ रूपमा), सुरु लामबद्ध बनेको र तुरुन्तै। यो स्कटिश प्रिमियर लिग को एक म्याच भित्र भयो। त्यसपछि "सेल्टिक" "Midlothian को हृदय" विरुद्ध प्ले। धेरै खेलाडीहरू त्यो छ, पहिलो खेल सम्भव छैन हुन्छ "खराब-पहिलो"। तथापि, McGeady सबै अद्भुत थियो - उहाँले तुरुन्तै उसलाई मिलान को सबै भन्दा राम्रो खेलाडी बनाएको भन्ने विरोधीहरूले विरुद्ध लक्ष्य स्कोरिङ, को 17 औं मिनेट मा आफूलाई देखाए। तर अक्टोबर 20 मा, उहाँले पहिले नै आफ्नो debut युरोपेली कप बनेको थियो। त्यसपछि "सेल्टिक" च्याम्पियन्स लिग-2004/2005 को समूह चरणमा डोनेट्स्क देखि "Shakhtar" भेटे।
दोस्रो सिजन तथापि, मिडफिल्डर लागि थाले धेरै राम्रो छैन - यो बलियो गोडा चोट थियो। तैपनि, उहाँले स्कटल्याण्ड को च्याम्पियनशिप मा एक उच्च स्तर मा नै देखाउन आफ्नो टीम मदत गरे। साथ "सेल्टिक" Aiden देश को ट्रिपल च्याम्पियन भए, दुई-समय स्कटिश कप र स्कटिश लिग कप को होल्डर। र सबै खेल मा उहाँले एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्।
Aiden Dzhon Makgidi एक लोकप्रिय फुटबल खेलाडी बने। 2010 मा, उदाहरणका लागि, तिनीहरूले गम्भीर आफ्नो मिडफिल्डर 14 लाख पाउण्ड लागि "सेल्टिक" दिन तयार थियो जो अंग्रेजी क्लब "बर्मिंघम सिटी" रुचि हो। तर त्यो क्षण मा, टोलीमा आफ्नो खेलाडी संग भागमा चाहँदैनथे।
तर त्यसै वर्ष को मई को अन्त मा यो मास्को "Spartak" 8 लाख यूरो लागि प्रस्ताव तयार छ कि चिनिन थाले। जुन 4, Muscovites एक औपचारिक प्रस्ताव गरेका छन्, तर "सेल्टिक" फेरि अस्वीकार गरे। तर अन्त मा, "स्पार्टाकस" आफ्नो बाटो थियो। अगस्ट3मा, आइरिस को मास्को क्लब को नेताहरूसित वार्ता पकड रूसी राजधानी गए, र केवल 10 दिन पछि आधिकारिक टोली खेलाडी बने। Aiden सेप्टेम्बर "स्पार्टाकस" को लागि र आफ्नो एक सहयोग को पहिलो खेलमा 11 debut।
मास्को खेलाडी मा क्यारियर सफल भएको थियो। तीन वर्षसम्म उहाँले 72 पटक क्षेत्र छोडेर 11 गोल। तर 2012 मा, सम्झौता को समाप्ति पछि उहाँले आफैलाई केही अन्य टोलीमा प्रयास गर्न चाहनुहुन्छ कि Irishman बताए।
थाहा रोचक छ
के मा क्लब खडा आज Eyden Makgidi? "Everton" - आफ्नो वर्तमान टीम छ। हामी 4.5 वर्ष एक सम्झौता निष्कर्षमा पुग्न गर्न निर्णय गरेका छौं। यसलाई 2004 देखि, को प्लेयर आइरिस राष्ट्रिय टीम को रंग बचाव भनेर थाह महत्त्वपूर्ण पनि छ। मिति, उहाँले 78 मिलानको लागि यो आयोजना र पाँच लक्ष्य जारी गरेको छ।
यो Aiden पिता पनि एक पेशेवर फुटबल खेलाडी थियो रोचक छ। उहाँले क्लब, "शेफील्ड संयुक्त" र "Newport Kaun" को लागि प्ले।
McGeady पनि प्रशंसक आफ्नो लडाई लागि जानिन्छ, "Rangers" - एक sworn शत्रु "सेल्टिक"। आफ्नो जीवनसाथीलाई फुटबल खेलाडी प्रशंसक, "Rangers" तिनीहरूलाई आक्रमण गर्ने देखि गिल्ला को वस्तु भए। Eyewitnesses Aiden आफूलाई रक्षा थियो कि दावी।
र McGeady परिवार छ। पत्नी क्लेयर र एउटा सानो4वर्षीया छोरी Kaia।
फुटबल खेलाडी र प्रशिक्षक पावेल Gusev
होटल "Delfin" (बुल्गारिया, सनी बीच): विवरण, सेवा,। होटल Delfin3*
विशेष गरी खाना पकाउन र व्यञ्जनहरु: घर मा Cranberry देखि वाइन
Ubuntu मा कार्यक्रम हटाउनुहोस्। धेरै तरिकाहरू
Tong पो। अमेरिकी कार्य चलचित्र मा यो भूमिका प्रदर्शन गरेको छ जो "Kickboxer" अभिनेता
शरीर मा म्याग्नेसियम को कमी: लक्षण र संकेत। के भने शरीर पर्याप्त म्याग्नेसियम छैन?
रूसी संघ को आपराधिक कोड मा सरकार प्रतिनिधि विरुद्ध हिंसाको प्रयोग
एन्टी-भाइरस सुरक्षा। कसरी एक Windows वातावरण मा एक कम्प्युटर अनलक गर्न
लेक Seliger कहाँ छ? लेक सेलिगर रूसको नक्सामा
सजिलो आहार - वजन एक surefire तरिका!
Schönbrunn कन्वेंशन: सामाग्री र अर्थ